Isethulo - I-AEON Harvest Industry (Hunan) Co., Ltd.
I-AEON Harvest ingumhambisi ogunyazwe ngokusemthethweni emakethe yomhlaba kanye neHUAHENG Automation. Sineqembu lesazi langaphambi kokuthengisa elizophendula imibuzo yamakhasimende futhi liqinisekise imininingwane yezobuchwepheshe, liqinisekise ukuthi konke ukukhetha kwempahla kufanelekile ukuthi kungabikho maphutha. Okubaluleke kakhulu, ithimba lensizakalo elinokuhlangenwe nakho ngemuva kokuthengisa elinonjiniyela abangaphezu kweshumi abalinde amahora angama-24 ukusiza amakhasimende ukuxazulula izingqinamba ngokuphuthumayo. Umgomo wethu ukunikela ngemisebenzi esezingeni eliphezulu nemikhiqizo ethembekile kubangani bethu nakubalingani bethu emhlabeni jikelele.
Siklama, sakha futhi sithengise okwehlukile okokusebenza kwe-welding, imishini yokusika izinsimbi kanye nemishini yokugcina impahla ye-AS / RS namathuluzi asizayo
■ Umshini Welding Orbital;
■ Izinsiza kusebenza ze-Arc Welding ezenzakalelayo;
■ Amathuluzi okulungiselela ama-Tube;
■ Umshini wokusika we-Plasma / Laser;
■ Imishini yokugcina impahla ye-AS / RS kanye nesoftware;
Isungulwe ngo-1995, i-HUAHENG Automation yinkampani esezingeni eliphezulu eqale ukunikela ngomshini wokushisela we-orbital, uhlelo lokusika lwe-CNC, ucwaningo lwemishini yokugcina impahla ye-AR / RS, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa eChina. Ehlose ukuba ngumhlinzeki wokushisela we-orbital ophambili emhlabeni jikelele kanye nomhlinzeki wezixazululo, i-HUAHENG ibilokhu izama ukufeza impumelelo eminingi yezobuchwepheshe, manje inabasebenzi abangaphezu kuka-800, futhi inamalungelo angaphezu kuka-200 ezimpahla ezisunguliwe namalungelo obunikazi.
Isibopho: IZwi Eliyisihluthulelo
Njengelungu elithobekile lomkhakha omkhulu wokukhiqiza wamazwe omhlaba, besilokhu sigcina igama elithi "Umthwalo wemfanelo" lijule ezingqondweni zethu. Umuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo esixoxa ngawo awubandakanyi nje kuphela umthwalo wenkampani kumakhasimende, kodwa futhi nesibopho senkampani kubasebenzi, futhi-ke nomsebenzi wesisebenzi ngasinye kuye. Umsebenzi wethu oyisisekelo kumakhasimende ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo ephephile, ethembekile nekhwalithi ephezulu, futhi sihlonipha nelungelo lamakhasimende lokwazi nokuzikhethela okukhulu, ngangokunokwenzeka ukuvumela amakhasimende aqonde imikhiqizo yethu kuzo zonke izinkomba, bese ngokukhululeka khetha imikhiqizo.
Umsebenzi wethu: Ukwakha inani lamakhasimende
Namathela kumqondo ovulekile nowokubambisana, wakhe inani lamakhasimende nabalingani bemboni, usize amakhasimende ukuthi abone ukuguqulwa kwedijithali nokuhlakaniphile kokukhiqiza, akhuthaze intuthuko esimeme yomkhakha wezokukhiqiza ohlakaniphile, futhi athuthukise kanye namakhasimende esimweni sokuwina.